Our Store | Bhutan News Service
लेखकः वाई. एन. चौलागाई
पृष्ठ संख्याः २३९
मूल्यः अमेरिकी डलर १५ (कुरियर खर्चसहित)
साक्षी पुस्तकको एक अंश
हामी त्यो समूहमा मिसिइसकेका थियौँ । पछिल्तिर उभिएका एक जवानले मेरा कानमा खुसुक्क भने, “सर, यो त पागल हो, यसका कुरामा नआउनुहोला ।’’
म झस्किए“ । उनी केके बरबराउँदै, हँसाउँदै थिए । मैले उनका छेउमा गएर बिस्तारै भनेँ, “राजु भाइ, तपार्ईँको कविता मलाई खुब राम्रो लाग्यो….”
“तपार्ईँले मेरो कविता मन पराउनु’भो । तर, म धन्यवाद दिन्नँ, किनभने त्यो मसँग छँदैछैन । मान्छेहरू आफूसँग नभएको चीज दिँदैनन्, होइन र, सर ! कि कसो ?” यति भनेर उनी डल्लो परेर हाँस्न थाले । उनलाई त्यस हाँसोमा अरूले पनि सघाए । केहीबेर म ट्वाल्ल परेर उभिरहे“ ।…. थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नोस्
शीर्षकः अलबिदा बेलडाँगी
लेखकः शिवलाल दहाल
पृष्ठ संख्याः २१५
प्रकाशनगृह: डिस्कोर्स पब्लिकेशन, काठमाण्डौ
मूल्यः अमेरिकी डलर १५ (सिपिङ्गसहित)
‘अलबिदा बेलडाँगी’ को एक अंश
बिदाइको दिन नजिकिँदै छ । धेरै कुरा छ अटाउनुपर्ने बीस–केजी झोलामा ।
बीस वर्षअघि र अहिले शरणार्थी क्याम्पको बसाइमा खासै फरक देखिएको छैन । उही बाँसले निर्मित रेलगाडीका डम्बाजस्ता लाम लागेका छाप्रा । बर्सातको हिलो र सुक्खा यामको धुलो उही । उही हावाहुरी र पानीझरी । उही कोलाहल, होहल्ला, बच्चाहरुको चिच्च्याहट, क्याम्पभित्रको उकुस–मुकुस र गुम्स्याहट । यो त्यही बेलडाँगी हो, हामी बीस वर्षअघि आउँदाको । हामीले पोकापुन्तरा बिसाउँदाको उदास र फिक्का अनुहार, यो उही बेलडाँगी–२ हो । संस्थाले दिने राहत–सुविधाहरु पनि उस्तैउस्तै हो । मेरो मतलब बाहिरी रुपाकृतिमा उस्तो भिन्नता छैन । फरक त परिवेश, चिन्तन र मूल्यमा छ । फरक त उद्देश्य, चेतना र गन्तव्यमा छ । फरक त मनोविज्ञान, दृष्टि र समष्टिमा छ ।
अहिले फेरि उही बेलडाँगी–२ मा आश्रय लिन आइपुगिएको छ । यो दुई दशकको समय निश्चय पनि छोटो होइन । एउटा सिङ्गै नयाँ पुस्ताकै सिर्जना भइसक्यो, भुटानलाई देख्तै नदेखेको, चिन्दै नचिनेको । जुन देशबाट लखेटिएर आएको हो, त्यही देशसँग आज अपरिचित, अनभिज्ञ ….